Ukucoca izindlebe nge-hydrogen peroxide: njani ukuhlambulula kakuhle iindlebe nge-hydrogen peroxide?
Ukunyamekelwa kweendlebe kuyimfuneko yococo lwezempilo. Yaye i-hydrogen peroxide yinto ecocekileyo yokuhlambulula isulfure. Isisombululo sinceda ukukhusela ukuqala kwesi sifo njenge-otitis media. Ukongezelela, le michiza iphilisa amanxeba avulekileyo kwaye ichithe iindawo ezinobungozi.
Ngoko, uya kucoca iindlebe zakho nge-peroxide. Ngaphambi kokuqhubeka kwinkqubo, kubalulekile ukwazi imithetho emininzi:
Akukho amathiphu e-cotton - iingcebiso ezinzima zingonakalisa ngaphakathi kwimbumba ye-tympanic;
unyango lweendlebe kufuneka lwenziwe emva kweshahla - isakhelo esithile esikhethekileyo sisetyenziswa ekupheleni kweenkqubo zamanzi;
Ungayisebenzisi kakubi - ngeveki, ukucocwa omnye kunele;
musa ukunyusa - ngeengxaki ezinzulu nezifo ze-ENT, i-peroxide iyaphikiswa;
Impendulo engaboniyo - isisombululo asiyiyo i-panacea yazo zonke izifo, kwaye ukuba i-plug ye-sulfur ayanyamalala, kuya kuba kufanelekile ukudibana nodokotela;
Sebenzisa kuphela ukubunjwa okuhlanjululwayo - isisombululo esingagqitywanga singonakalisa iindlebe kunye nesikhumba.
Akukho nto inzima ekucoceni indlebe zomntu. Kwanele ukudibanisa i-hydrogen peroxide ngamanzi, sebenzisa isiluleko kwiboya yekoton kwaye uphathe umgangatho wangaphakathi wentlebe.
Indlela yokucoca iindlebe nge-hydrogen peroxide kubantwana?
Ekubuntwaneni, iindlebe ziyingxenye ebuthathaka kwi-body for infection. Ngoko ke, kufuneka uhlolisise ubumsulwa babo kwaye ukhusele ukuqokelela kwesulfure.
Ootitshala bezilwanyana bayacetyiswa ukuba basebenzise i-peroxide ngezi njongo zilandelayo:
ukususa isulfure nezinye iifom;
ukuphatha i-otitis nokukhusela ukubonakala kwazo;
sukuma amanxeba amancinci nge-hydrogen njenge-antiseptic.
Inkqubo yokucocwa kakuhle kweendlebe kubantwana ilandelayo:
Beka umntwana kwi-sofa, uyijike ecaleni, indlebe phezulu.
Thela i-peroxide kwi-pipette uze uyiqhube entle yomntwana wakho. Kwanele ama-3-5 ahla.
Cebiso! Ukuze isisombululo sithathe kwaye senze, umntwana kufuneka alele phantsi okungenani imizuzu eyi-10.
Emva kokuba i-peroxide ifakwe kwisulfure, kuyimfuneko ukususa kuyo indlebe: umntwana uyaphuma aze aphephe intloko yakhe. Izintsalela zokungcola kunye nesisombululo zisuswe nge-cotton swab (kodwa kungekhona ngentonga).
Ukuxinwa kwe-peroxide akufanele kudlule i-1.5%.
Iiplagi ezihambayo zesulfure ezindlebeni zomntwana ziya kufuna unyango kwisimo esibhedlele.
Nceda nceda! Abantwana ukuya kwiinyanga ezi-6 bangcono ukuba bangahlambululi iindlebe ngesisombululo esinjalo. Ngaphandle koko, kukho umngcipheko wokulimaza i-eardrum yesana.
Ukucoca izindlebe nge-hydrogen peroxide kwizinja
Ucoceko lwesilwanyana sisiseko sempilo, kungekuphela kwakhe, kodwa kubanikazi bakhe. Ngoko ke, kubalulekile ukujonga ukucoceka kweendlebe zeenja, ukukhusela ukuphuhliswa kweepustules okanye ukuqokelela kwesulfure.
Inkqubo echanekileyo yokucoca iindlebe yilezi zilandelayo zenzo:
Bathe inja uze uyisule ngetayiliti elithambileyo, ubeke ingqalelo kuyo yonke indawo yentloko.
Ukubetha isilwanyana kunye nokuthetha nayo, ngenyameko uyibeke isilwanyana kwicala layo.
Gcobhoza ikotoni kwi-peroxide uze uyibeke ngaphakathi kwendlebe yenja.
Ukuhlamba indawo yintloko yesilwanyana sakho, ukuphepha ukunyuka kwezilwanyana ngokuzumkrazo nokungazinzi.
Nika inja ukuba igubungele intloko kwaye isuse iinqwelo ze-sulfuri ekhuni kunye nesisombululo.
Yiphathe iindlebe zeenja ngeentambo ezimanzi, kodwa ungayifaki kakhulu ngaphakathi kwegobolondo. Ungasebenzisa i-lotion okanye i-oil efakwa kwi-discton disc. Kodwa ungasebenzisi i-swab ye-cotton engalimaza iimbumba zangaphakathi zezilwanyana.
Cebiso! Emva kokuba uqedile ukucoca enye yeendlebe zeenja, qiniseka ukuba utshintshe inqanawa esetyenziswayo kwisampuli ecocekileyo. Ngaphandle koko, kukho ukusuleleka kwintsholongwane yokugula kwindlebe ibe yimpilo.
Xa sele ufumene umkhuhlane okanye i-edema ecaleni kwimbumba yeenja, thabatha isilwanyana kwizilwanyana. Ingcali iza kukuxelela ukuba uza kuhlamba indawo engcolileyo. Gcoba iindlebe zakho kunye nawe! Yimpilo!
Ukuhlaziywa nge-acaluronic acid
Iintlanzi zikhangela isikhumba esihle
Iimfashini zesikhwama-ze-Fashion-2017: I-TOP-3 yamanqaku asekhaya
Ukuba ubukroti abukanyanga ukuya okhalweni: iintambo ze-styles zefestile ukuya kwizinwele eziphakathi
Yintoni uWong athetha ngayo ngoVetin: uyakholelwa okanye akunjalo?
I-Cupcake yeMarble kunye ne-Mattee Tea
Umntwana uthanda ukudweba: ukunika isikolo sobugcisa?
Amalungelo amabhinqa kwintsapho